Uyilo kunye nokuyilwa kwetekhnoloji | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ubuchule kunye noyilo, ezimbini amagama ngokungathandabuzekiyo ahambelana ngokusondeleyo Kwaye ukwenza izinto ezahlukeneyo kukhokelela ekufezekiseni iziphumo ezahlukeneyo, ukubakhona apho izinto ezintsha zidlala indima ephambili xa kuziwa ukufezekisa uyilo olunesibindi, i-avant-garde kwaye yaphula nayiphi na iparadigm.
1 Imizekelo esi-7 apho uyilo luhambelana ngokungqongqo nezinto ezintsha
2 Ukudalwa kwephaneli "yeeflips-dots" ezisebenzisanayo ukunxibelelana neDatha eNkulu
3 Ipraprip yiprinta, iphinda iphindaphinde iprinta ye-3D
5 Ukudlala ngokukhanya
6 Incwadi yokupheka, i-ecology kunye noyilo ekwabelwana ngalo
7 Xa imyuziyam ikwi-hard drive
Imizekelo esi-7 apho uyilo luhambelana ngokungqongqo nezinto ezintsha
Sithathe le mizekelo IZiko loyilo leBarcelona, Ukusuka apho zinikwe khona ezi projekthi zingakholelekiyo.
Ukudalwa kwephaneli "yeeflips-dots" ezisebenzisanayo ukunxibelelana neDatha eNkulu
Olu luyilo loyilo luboniswe kwi- I-World World Congress 2017 Kwaye sisikrini esikhulu esine-flips-dot esikwanayo nesisebenzisanayo, esikwaziyo ukubona imifanekiso yangaphandle evumela abantu ukuba banxibelelane nomxholo okuyo.
Ngale nto, umntu lowo wayenethuba lokuziva kunye nokuqonda ukuba i-Big Data inokufikelela phi; abayili ngenxalenye yabo bashiya iingcango zivulekile kwezinye izidalo ngomboniso wokuba kunokwenzeka ukuba uyiphathe ngokwedatha ye-macro.
Ipraprip yiprinta, iphinda iphindaphinde iprinta ye-3D
Ngayo Iprojekthi yeRep-rapImalunga nokufezekisa ukusekwa kweqela elinakho ukuzikopa ngokwalo kugxilwe kwiimodeli ezikhawulezayo kunye nakwimveliso, yeenguqulelo ezifumanekayo ukuza kuthi ga ngoku zezakutshanje "Mendel", Ikopi encinci encinci ephumelela ukushicilela okukhulu ngaphandle kobungakanani bayo.
Uyilo olunje ngezi zinto zinika indlela ekwenziweni kwezixhobo kunye nezixhobo ezisebenza kwiindawo ezininzi, kwinzululwazi umzekelo zenza ukuba kwenzeke ukudalwa Iiprototypes zedijithali zokufakelwa de ufikelele kwimodeli efanelekileyo yesigulana.
Iprojekthi yabo entsha idibanisa iibhodi zekhompyuter ezenziwe ngokwazo kwimeko yehardware yesoftware kunye nesoftware, ukwenza indlela yendalo yazo "hvinyinyme.me”Kwaye iqulathe iqonga elinika ukufikelela kubemi besixeko, ukuze le ngxelo ikwinqanaba lomoya lendawo ebangqongileyo ngexesha lokwenyani ngeenjongo zokuphucula ulawulo lwendawo abahlala kuyo.
Kule projekthi isiseko yi Uyilo lweempawu kunye nendawo yokuhlangana. Oku kunokufakwa kwindawo ekuthiwa zibubulumko izixeko ezizalisa ngokuthe ngcembe iindawo zoluntu.
Le projekthi ibizwa ngokuba “Ukukhanya kweKinetics, kwiluphu"funda Espada kunye neSanta Cruz, ijolise kwimisebenzi yayo emitsha ekuzameni indlela yokuziphatha kokukhanya ngokukulawula ngesimodeli somzimba.
Iziphumo Umtsalane kwisiphumo esenzekayo ngokubeka isivamvo esincinci sombane kwibhalbhu ebizelwe ukuqokelela amandla ombane omncinci ukwenza isuntswana lokukhanya elihamba kulo lonke ufakelo, livule amathuba angapheliyo okuzama ufakelo.
Incwadi yokupheka, i-ecology kunye noyilo ekwabelwana ngalo
Iqonga elikhulu leresiphi livula ukukhuthaza uyilo lwenxaxheba olukhuthaza izimvo ze indlela yokuzenza, Izinto eziqala kwizixhobo ezinokuphinda zisetyenziselwe ukunika ubomi kwiintlobo ezahlukeneyo zoyilo ezinemisebenzi eyahlukeneyo, nangona kugxilwe kuyilo lwemveliso.
Xa imyuziyam ikwi-hard drive
Esi siphakamiso yoyilo sinomdla esihamba kunye USuleiman Lopez, Iinjongo zokuyila ngokutsha uyilo imyuziyam yedijithali, oqulathe nawuphi na umsebenzi onokumelwa ngale ndlela ngenjongo yokuqonda ukuba imyuziyam ingabubugcisa njani.
Ngaphandle kwamathandabuzo isampulu yendlela izithuba kunye nezinto ezintsha ezinokuthi zingqinelane.
Izinto ezinxitywayo, ithuba lokwenza izinto ezintsha
Le projekthi ibizwa IMAQUILA R4 (MR4) kwaye yenziwa ngu-Amor Muñoz, ibandakanya ukwenziwa kwemijikelezo yelaphu elukiweyo ehambelana ne Ingubo yobugcisa, kunye nesitampu esithile esinikezelwa zizicelo ezizenzileyo zachongwa njengezintsha ngenxa yendlela ezixutywe ngayo nezinto zelaphu.
Olu qulunqo luxhomekeke kumatshini omncinci ophathwayo awathi waziwa ngawo eMexico, ngohlobo oluthile Umsebenzi wendlu ngendlu, ezinje ngokuvelisa iisekethe zelaphu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Uyilo kunye notshintsho lwetekhnoloji